ဖလားတဈလုံးဆုံး၊ အဆငျ့ ၄ ကို စိုးရိမျလာရတဲ့ ခြဲလျဆီးနဲ့ တူဟယျလျတို့ အမှားတွှေပငျနိုငျမလား – Sports A2Z
ရာသီအသိမျးကာလမှာမှ အာဆငျနယျနဲ့ လကျစတာတို့ကို တပတျအတှငျး ၂ ပှဲဆကျတိုကျ အရေးနိမျ့ပွီး FA ဖလားကို လကျလှတျခဲ့ရတဲ့အပွငျ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့တနရောစာကိုပါ ခွိမျးခွောကျခံလာရတဲ့ နညျးပွတူဟယျလျဟာ လာမယျ့ လကျကနျြ ၃ ပှဲအတှငျးမှာ ခယျြလျဆီးကို ဘယျလိုကယျတငျသှားမလဲဆိုတာ အတျောလေးစိတျဝငျစားစရာကောငျးပါတယျ။
ပွောရရငျ လမျးပတျလကျထကျ နောကျဆုံး ၅ ပှဲမှာ ၄ ဂိုးသာသှငျးယူထားနိုငျတဲ့ ခယျြလျဆီးလကျဟောငျးကို လကျရှိတူဟယျလျရဲ့ နောကျဆုံး ၅ ပှဲ၊ ၅ ဂိုးသာသှငျးယူထားနိုငျတဲ့ မမွငျခငျြစရာ မှတျတမျးဆိုးမှာ ပွနျလညျမွငျတှနေ့ရေတာဖွဈပွီး ဒါက ဂြာမနျသားကွီး အဓိကဖွရှေငျးရမယျ့ တိုကျစဈပွဿနာဖွဈလာတယျ။
အာဆငျနယျကို ဘာလို့ရှူံးလဲ? လကျစတာက ဘာလို့ရှုံးလဲ? အဖွကေ ရိုးရှငျးပါတယျ။ ခယျြလျဆီး ဂိုးမသှငျးနိုငျခဲ့ပါဘူး။ လှနျခဲ့တပတျကြျောကပဲ မနျစီးတီးလိုအသငျးကို ၂၁ ရကျအတှငျး ၂ ပှဲဆကျ အနိုငျကစားခဲ့တဲ့ တူဟယျရဲ့အသငျးအတှကျ ရလဒျမတညျငွိမျခွငျးအ​ကွောငျးက ဘကျပေါငျးစုံကနေ သံသယဝငျစရာရှိလာတယျ။
ကြိနျးသပေေါကျမှားယှငျးနတောကတော့ တိုကျစဈပိုငျးဖွဈတယျ။ လကျစတာနဲ့ လီဗာပူးလျတို့က ယူနိုကျတကျကို အနိုငျယူခဲ့ခြိနျမှာ ခယျြလျဆီးက အမှတျဆုံးလို့ ကောငျးနသေလို လီဗာပူးလျက ပွီးခဲ့တဲ့ညကပဲ ဝကျဈဘရှမျးဆီက ၃ မှတျယူသိမျးသှားခဲ့လို့ တမှတျအကှာကနေ ဖိအားပေးခြိနျမှာ တူဟယျလျရဲ့အသငျးက အမှားမခံတော့တဲ့ အနအေထားဖွဈလာတယျ။
လီဗာပူးလျက ပဲလစျေ့၊ ဘနျလတေို့နဲ့ ကစားရငျး ပရီးမီးယားလိဂျကို ပိတျသိမျးနခြေိနျမှာ ခယျြလျဆီးက လကျကနျြ ၂ ပှဲမှာ လကျစတာ၊ ဗီလာတို့နဲ့ ကစားရမှာဖွဈသလို လကျစတာက နောကျဆုံးပှဲစဥျကို စပါးဈကို ရငျဆိုငျရမှာဖွဈတယျ။ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့လုပှဲမှာ ၃ သငျးလုံး တခကျြမှ အမှားမခံနိုငျတော့သလို မှားတဲ့အသငျးက အစားခံရတော့မယျ။
ခယျြလျဆီးမှာ တိုကျစဈပိုငျးက ခိုငျဟာဗတျဇျ၊ ဗာနာတို့ရဲ့ ဂိုးပေါကျကွောငျပြောကျမှုက ရှငျးထုတျရမယျ့ ကြောရိုးပွဿနာဖွဈပွီး ဂိုးသမားကယျပါက အခုလို မိုးထဲရထေဲအကပျြအတညျးမှာ မနျဒီကို ကြျောပွီး ခယျြလျဆီးလူစာရငျးမှာ မပါသငျ့တော့တဲ့သူမြိုးဖွဈတယျ။ သူပါတဲ့ အာဆငျနယျ၊ လကျစတာနှဈပှဲဆကျ ခယျြလျဆီးရှုံးခဲ့တာပါ။
ပွညျတညျနာလိုဖွဈလာတဲ့ တိုကျစဈ ဂိုးမိုးခေါငျမှုကို အမွနျဆုံးကုသနိုငျမှ တူဟယျလျအတှကျ မေ ၂၉ မှာ ကစားမယျ့ ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲအတှကျပါ မြှျောလငျ့ခကျြရှိလာမှာဖွဈပွီး လာမယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ၂ ပှဲဆကျမှာ ၆ မှတျအပွညျ့ စုဆောငျးနိုငျမယျဆိုရငျ တခကျြခုတျ နှဈခကျြပွတျဖို့ လိုအပျတာက တူဟယျရဲ့အသငျး ဂိုးမြားမြားသှငျးဖို့ပါ။
တူဟယျလကျထဲမှာ ၂ ဂိုးအထကျသှငျးခဲ့တဲ့ပှဲဆိုလို့ ပဲလစျေ့ကို ၄-၁ နဲ့ အနိုငျရတဲ့တပှဲသာ ရှိနပွေီး ခယျြလျဆီးရဲ့ ဒီရာသီ အကွီးမားဆုံးအားသာခကျြနဲ့ စုဖှဲ့မှုက သူရောကျလာပွီးနောကျပိုငျး တဟုနျထိုးပွောငျးလဲသှားခဲ့တဲ့ ခံစဈပိုငျးတညျငွိမျမာကြောမှုဖွဈတဲ့နညျးတူ မကုသနိုငျသေးတဲ့ တိုကျစဈပိုငျးတုံးအသှားခဲ့မှုဖွဈခဲ့တာက မပွီးသေးတဲ့ စတမျးဖို့ဒျဘရဈချြရုပျလုံးကို အဆငျ့ထပျမွှငျ့ပွီး အသကျသှငျးကယျတငျဖို့ တူဟယျအတှကျ အခြိနျမီပွငျဆငျရမယျ့ အဓိကသငျခနျးစာလို့လညျး ဆိုရမှာဖွဈ​တယျ။
ဒါ့အပွငျ မိုကျကယျအိုဝငျကတော့ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ နှဈနရောစာမှာ လီဗာပူးလျနဲ့ ခယျြလျဆီးတို့ကို လကျစတာအသငျးထကျ ပိုယုံကွညျနတောကို တှရေ့ပွီး အထငျသေးခံထားရတဲ့ ရော့ဂြားဈရဲ့ တငျဆကျမှုကို လာမယျ့ ခယျြလျဆီးနဲ့ပှဲမှာ တူဟယျကြျောဖွတျနိုငျဖို့ အဓိကလိုအပျကွောငျး ရေးသားတငျဆကျပေးလိုကျရပါတယျ။
ZAWGYI: ရာသီအသိမ်းကာလမှာမှ အာဆင်နယ်နဲ့ လက်စတာတို့ကို တပတ်အတွင်း ၂ ပွဲဆက်တိုက် အရေးနိမ့်ပြီး FA ဖလားကို လက်လွှတ်ခဲ့ရတဲ့အပြင် ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်တနေရာစာကိုပါ ခြိမ်းခြောက်ခံလာရတဲ့ နည်းပြတူဟယ်လ်ဟာ လာမယ့် လက်ကျန် ၃ ပွဲအတွင်းမှာ ချယ်လ်ဆီးကို ဘယ်လိုကယ်တင်သွားမလဲဆိုတာ အတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။
ပြောရရင် လမ်းပတ်လက်ထက် နောက်ဆုံး ၅ ပွဲမှာ ၄ ဂိုးသာသွင်းယူထားနိုင်တဲ့ ချယ်လ်ဆီးလက်ဟောင်းကို လက်ရှိတူဟယ်လ်ရဲ့ နောက်ဆုံး ၅ ပွဲ၊ ၅ ဂိုးသာသွင်းယူထားနိုင်တဲ့ မမြင်ချင်စရာ မှတ်တမ်းဆိုးမှာ ပြန်လည်မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပြီး ဒါက ဂျာမန်သားကြီး အဓိကဖြေရှင်းရမယ့် တိုက်စစ်ပြဿနာဖြစ်လာတယ်။
အာဆင်နယ်ကို ဘာလို့ရှူံးလဲ? လက်စတာက ဘာလို့ရှုံးလဲ? အဖြေက ရိုးရှင်းပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီး ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တပတ်ကျော်ကပဲ မန်စီးတီးလိုအသင်းကို ၂၁ ရက်အတွင်း ၂ ပွဲဆက် အနိုင်ကစားခဲ့တဲ့ တူဟယ်ရဲ့အသင်းအတွက် ရလဒ်မတည်ငြိမ်ခြင်းအ​ကြောင်းက ဘက်ပေါင်းစုံကနေ သံသယဝင်စရာရှိလာတယ်။
ကျိန်းသေပေါက်မှားယွင်းနေတာကတော့ တိုက်စစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်။ လက်စတာနဲ့ လီဗာပူးလ်တို့က ယူနိုက်တက်ကို အနိုင်ယူခဲ့ချိန်မှာ ချယ်လ်ဆီးက အမှတ်ဆုံးလို့ ကောင်းနေသလို လီဗာပူးလ်က ပြီးခဲ့တဲ့ညကပဲ ဝက်စ်ဘရွမ်းဆီက ၃ မှတ်ယူသိမ်းသွားခဲ့လို့ တမှတ်အကွာကနေ ဖိအားပေးချိန်မှာ တူဟယ်လ်ရဲ့အသင်းက အမှားမခံတော့တဲ့ အနေအထားဖြစ်လာတယ်။
လီဗာပူးလ်က ပဲလေ့စ်၊ ဘန်လေတို့နဲ့ ကစားရင်း ပရီးမီးယားလိဂ်ကို ပိတ်သိမ်းနေချိန်မှာ ချယ်လ်ဆီးက လက်ကျန် ၂ ပွဲမှာ လက်စတာ၊ ဗီလာတို့နဲ့ ကစားရမှာဖြစ်သလို လက်စတာက နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကို စပါးစ်ကို ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်လုပွဲမှာ ၃ သင်းလုံး တချက်မှ အမှားမခံနိုင်တော့သလို မှားတဲ့အသင်းက အစားခံရတော့မယ်။
ချယ်လ်ဆီးမှာ တိုက်စစ်ပိုင်းက ခိုင်ဟာဗတ်ဇ်၊ ဗာနာတို့ရဲ့ ဂိုးပေါက်ကြောင်ပျောက်မှုက ရှင်းထုတ်ရမယ့် ကျောရိုးပြဿနာဖြစ်ပြီး ဂိုးသမားကယ်ပါက အခုလို မိုးထဲရေထဲအကျပ်အတည်းမှာ မန်ဒီကို ကျော်ပြီး ချယ်လ်ဆီးလူစာရင်းမှာ မပါသင့်တော့တဲ့သူမျိုးဖြစ်တယ်။ သူပါတဲ့ အာဆင်နယ်၊ လက်စတာနှစ်ပွဲဆက် ချယ်လ်ဆီးရှုံးခဲ့တာပါ။
ပြည်တည်နာလိုဖြစ်လာတဲ့ တိုက်စစ် ဂိုးမိုးခေါင်မှုကို အမြန်ဆုံးကုသနိုင်မှ တူဟယ်လ်အတွက် မေ ၂၉ မှာ ကစားမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲအတွက်ပါ မျှော်လင့်ချက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီး လာမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် ၂ ပွဲဆက်မှာ ၆ မှတ်အပြည့် စုဆောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် တချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်ဖို့ လိုအပ်တာက တူဟယ်ရဲ့အသင်း ဂိုးများများသွင်းဖို့ပါ။
တူဟယ်လက်ထဲမှာ ၂ ဂိုးအထက်သွင်းခဲ့တဲ့ပွဲဆိုလို့ ပဲလေ့စ်ကို ၄-၁ နဲ့ အနိုင်ရတဲ့တပွဲသာ ရှိနေပြီး ချယ်လ်ဆီးရဲ့ ဒီရာသီ အကြီးမားဆုံးအားသာချက်နဲ့ စုဖွဲ့မှုက သူရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်း တဟုန်ထိုးပြောင်းလဲသွားခဲ့တဲ့ ခံစစ်ပိုင်းတည်ငြိမ်မာကျောမှုဖြစ်တဲ့နည်းတူ မကုသနိုင်သေးတဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းတုံးအသွားခဲ့မှုဖြစ်ခဲ့တာက မပြီးသေးတဲ့ စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျရုပ်လုံးကို အဆင့်ထပ်မြှင့်ပြီး အသက်သွင်းကယ်တင်ဖို့ တူဟယ်အတွက် အချိန်မီပြင်ဆင်ရမယ့် အဓိကသင်ခန်းစာလို့လည်း ဆိုရမှာဖြစ်​တယ်။
ဒါ့အပြင် မိုက်ကယ်အိုဝင်ကတော့ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် နှစ်နေရာစာမှာ လီဗာပူးလ်နဲ့ ချယ်လ်ဆီးတို့ကို လက်စတာအသင်းထက် ပိုယုံကြည်နေတာကို တွေ့ရပြီး အထင်သေးခံထားရတဲ့ ရော့ဂျားစ်ရဲ့ တင်ဆက်မှုကို လာမယ့် ချယ်လ်ဆီးနဲ့ပွဲမှာ တူဟယ်ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ အဓိကလိုအပ်ကြောင်း ရေးသားတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။